Mwari aive kupi Jesu paakamudaidza ari pamuchinjikwa achiti, ‘Mwari wangu, Mwari wangu mandisiireiko?’
churchages.net » Shona » Zvidzidzo zveBhaibheri » Mwari aive kupi Jesu paakamudaidza ari pamuchinjikwa achiti, ‘Mwari wangu, Mwari wangu mandisiireiko?’
MATEO 27:46 Nenguva inenge yepfumbamwe Jesu akadana nenzwi guru achiti, Eri, Eri ramasabakatani! Ndokuti Mwari wangu, Mwari wangu mandisiyireiko?
Isaya nemutauro wake wakarungwa zvakanakisa uye mufananidzo wake wakanakisa, akazivisa chinhu chinoita ‘sechisingagoneki” munhu-Muponesi aizozvarwa nemhandara saka nekudaro, kunyange aiita semunhu akaita sesu, asi Iye zvakare achirarama kure kana kumusoro-soro kwezvatingafungira isu vanhu.
Kwatiri Mwana anozvarwa, zvakataurwa naIsaya, Mwana uyu achave Mwari pachake, Baba vokusingagumi. Mwari anoshamisa uyu muMunhu ndiye chakavanzika chikuru zvekuti chakapatsanura chiKristu kuita mapoka matatu. Vazhinji ndevaya vanotenda kuti Baba neMwanakomana Vanhu vaviri vakasiyana, mumwe nemumwe wavo ari Mwari. Asi zvakadaro, hapana pakati pavo vose anoziva kuti sei, kungori maMwari mumwechete. Vanotenda kuTiriniti vanotenda muna Mwari wevanhu vatatu uye veZvapupu zvaJehova vanotenda muna Mwari weVanhu vaviri.
Zvino kune muono wevanhu vashoma, kuti Mwari Munhu mumwechete, nekuda kwekuti kuzara kwovuMwari kwakagara muna Kristu.
Mune mamwe mazwi Mwari akava munhu akatora zita reMunhu Jesu Kristu. Zita rake raishandiswa zvakanyanya kuTestamente yekare rekuti Jehova harina kuzoshandiswa zve muTestamente Itsva. Chinangwa cheTestamente yekare chaive chekugadzirira nzira yaMwari kuti agova Munhu. Zvino chinangwa cheTestamente Itsva ndechekuti Mwari atiite vanhu vanonamata uye vatsvene vaanoda iye kuti tive. Saka Mwanakomana waMwari ndiye Munhu Jesu, maari Mweya waMwari unoshamisa wakagara kuti Mwari azviratidze kana kuti hunhu hwake hwemunhu huwonekwe. SeMweya, Mwari aikwanisa kuratidzira zviri nyore simba rake rinoshamisa. Asi kubva Mwari paakaita munhu nemufananidzo wake, zvairevawo kuti kune rumwe rutivi rwaMwari rwune hunhu hwemunhu.
Kuti aratidzire hunhu hwake hweMunhu, Mwari akava munhu kuti agare nesu (ndizvo zvinoreva Zita rake rekuti “Emanuere”) kwemakore 33 akatisiira muenzaniso wakanakisa. Bhaibheri (Shoko raMwari) ndiro nheyo dzekubatanidza zvemweya unoshamisa nehumunhu. Testamente yekare yakazivisa kuti kwaizouya Messiasi. Zvino humwari hwese hwakazogara muMunhu Jesu kuzadzisa zvakaprofitwa muTestamente yekare pamusoro peMudzikinuri.
Jesu ndiye Munhu ega uyo kuzara kwehuMwari kwakagona kugara maari.
Mwari aida ropa remunhu kuti aripire zvivi zvevanhu. Saka Mwari aifanira kuzvisikira Muviri kuti ararame mauri. Zvino Munhu akarurama uyu akazova chibairo chezvivi. Saka, kana tazvarwa patsva, Mwari anoisa mugove weMweya wake mumoyo yedu. Mugove weMweya MuTsvene uyu hausingori mweya waMwari unoshamisa chete asiwo une hunhu hwemunhu mauri. Zvakadaro mugove weMweya Mutsvene uyu unotiita rudzi rwevanhu runodiwa kuti tive naMwari. Saka chikamu chaMwari chinogara matiri kuti aratidzire humunhu hwake. Ndicho chikamu chezvinomiririrwa nekuti kuzvarwa patsva. Mwari anoda kurarama achiratidza humwe hunhu hwake muhupenyu hweumwe nemumwe wedu.
Asi Mwari anokwanisa chete kuratidza huMunhu hwake mumiviri yevanhu.
Satani akafara kurarama munguruve paGedara. Satani akapinda munguruve dzikazvinyudza mumvura. Kuzviuraya mweya waSatani. Zvisinei Mwari anoda kurarama muvanhu vakazvarwa patsva achivapa hupenyu husingaperi, pachinzvimbo cherufu.
Mwari anoda kuti hunhu hwedu hwekare hufe apo anosika munhu mutsva ari nani mukati memiviri yedu. Mwari anoda kutiita vanhu vaanokwanisa kushandisa kuzadzisa kuda kwake.
Bhaibheri rinozivisa chokwadi, uye rinomisikidza miganhu yehunhu hwakakodzera pakunamata Mwari uye hunhu hutsvene, nenzira imwechete inoisirwa Israeri miganhu naMwari muNyika yeChipikirwa chaAbrahama.
Isu chipikirwa chedu ndiwo Mweya Mutsvene.
MABASA 2: 38 Petro akati kwavari: Tendevukai, mumwe nomumwe wenyu abapatidzwe nezita raJesu, kuti mukanganwirwe zvivi, mupiwe chipiwa choMweya Mutsvene.
39 Nokuti chipikirwa ndechenyu navana venyu, navose vari kure. ...
Isu nyika yedu ndiro Bhaibheri.
Tinokwanisa kuwana makomborero ese uye kurairwa kwedu kwese uye kuchengetedzwa kwese kubva muBhaibheri, uyezve kudzidza Magwaro pamusoro perudo rwaMwari kwatiri uye hurongwa hwaari nahwo nesu, uyezve basa redu kuna Mwari pamusoro perudzi rwevanhu. Bhaibheri rinozivisawo kunyengera kwaSatani kunotiita kuti tigare takangwarira tirege kuita nungo nekuvarairwa.
MuKristu akazvarwa patsva ane zvese hunhu hwemweya unoshamisa uye hunhu hwemunhu zvinobva kunaMwari, zvese zvinobva pakunzwisisa Bhaibheri. Mweya Mutsvene wega uri mauri ndiwo unogona kukudzidzisai chokwadi chezvinotaura Bhaibheri.
Mweya wedu wevanhu wekare (fungai nezvawo rembwa yakaipa) unorwisana nemweya wedu wemunhu mutsva (imbwa yakanaka) watinowana kubva kuna Mwari. Imbwa mbiri idzi dzinorwa matiri kasingaperi. Inokunda ndiyo imbwa yatinopa chekudya zvakanyanya.
Ngatitangei tatarisa zvimwe zviratidzo zveDenga zvakaonekwa nevanhu munguva dzeBhaibheri.
Danieri, Stefani, naJohane muzaruriri vakaona zviratidzo zvaMwari zvaiita kunge Vanhu vaviri. Aya ndiwo Magwaro anotaurwa neZvapupu zvaJehova kuti vatsigire pfungwa yavo yevanhu vaviri muhuMwari. Baba ndiMwari, Mwanakomana ndimwari (anotanga nevara duku ra m). VeTiriniti vanopokana nekudaidza Baba kuti Mwari uyezve Mwanakomana kuti Mwari (vose vane mavara makuru a M). Asi vanotenda kuTiriniti havagoni kuwana chiratidzo chepakambobvira paonekwa Vanhu vatatu. Chavanotovimba nacho ndepakabapatidzwa Jesu pavanoona Munhu neNjiva ichiburukira paari neNzwi ravakanzwa.
MATEO 3:16 Jesu, wakati abapatidzwa, pakarepo akabuda mumvura. Zvino tarira denga rakamuzarurirwa (Johane mubapatidzi) akavona Mweya waMwari uchiburuka senjiva. Akavuya pamusoro pake (Jesu).
17 Zvino tarira inzwi rakabva kudenga richiti, Uyu ndiye Mwanakomana wangu unodikanwa wandinofarira!
Kubva pachiitiko ichocho maKristu mazhinji anoti kwaive neVanhu vatatu, asi Johane haana kubvira aona Vanhu vatatu.
Saka hakuna akabvira aona huMwari hweVanhu vatatu muBhaibheri inodaidzwa kuti Tiriniti.
Baba vemwana ndiye murume anoisa mbeu yehupenyu mumimba yaamai. Munyaya yaJesu, baba ava vaive Mweya Mutsvene. Chinhu ichi chakadzokororwa kaviri, kuti pave nechokwadi chekuti tinzwisise zvakaitika.
MATEO 1:18 Kuberekwa kwaJesu Kristu kwaiva kudai, Maria mai vake, wakati anyengwa naJosefa, vasati vasangana, wakavonekwa ava nemimba noMweya Mutsvene.
MATEO 1:20 … Josefa mwanakomana waDhavhidhi, usatya kutora Maria, mukadzi wako, nokuti icho chakagamuchidzwa mukati make ndechoMweya Mutsvene.
Saka Mweya Mutsvene ndiwo Baba vaJesu Kristu, saka nekudaro Ndivo vaotaura vachiti, “Uyu ndiye Mwanakomana wangu wandinodisa” pavakaburuka seNjiva. Zvakare, Sezvinotaurwa neZvapupu zvaJehova, ava vanoramba vakaita seVanhu vaviri kwete vatatu. Hakuna munhu anogona kuona Izwi.
Kutaura chokwadi, kana mukaona munhu nenjiva munozongotaura kuti makaona munhu mumwechete.
Humbowo uhu, kana huchitsigira Vanhu vaviri kana vatatu muhuMwari, hunoita sehunotsigira veZvapupu zvaJehova vanotenda kuVanhu vaviri muhuMwari, kwete huMwari hweTiriniti hweVanhu vatatu husina kubvira hwaonekwa muMagwaro. Hakuna akabvira aona Tiriniti kana kuti huMwari hweVanhu vatatu muBhaibheri.
Mwari aida kuzodza Jesu paruzhinji akabva asarudza kuti Mweya wake wekuzodza umiririrwe neNjiva kuitira kuti tisaite kukanganisa kwekufunga kuti kwaive nevanhu vaviri vaivepo. Muparidzi paanozodzwa neMweya Mutsvene, hazvimuiti kuti ave vanhu vaviri. Mweya unongomuzodza chete kuti abate basa raMwari.
Kana Mwari ari Vanhu vanodarika mumwechete, Mwari anenge asina Zita.
VeZvapupu zvaJehova vanotsanangura Mwari wavo wevanhu vaviri saJehova naJesu. Tarirai, hakuna Zita rimwechete raMwari wavo.
Tiriniti ine dambudziko rakakurisa. Vanodaidza Baba neMwanakomana saJehova naJesu, asi Mweya Mutsvene hauna Zita muMagwaro. Saka vane mazita maviri ekudaidza Vanhu vatatu. Izvi hazvikurudziri zvachose. Havatorina Zita rimwechete raMwari wavo wemutumbi mitatu. Sezvo pasina kana rimwe remapoka aya rinogona kutipa Zita rimwechete raMwari wemaKristu, pfungwa idzi dzose pamusoro pehuMwari hadzigutsi.
Vanotenda kuTiriniti vanoedza kuzadzisa mukaha uyu nekutaura kuti, “Muzita raBaba, Mwanakomana naMweya Mutsvene” asi havatogoni zvachose kutiudza kuti Zita iri nderekuti kudii. Mazita ezvinzvimbo matatu harisi Zita remunhu.
Saka dambudziko riri kwese kukundikana kwemaKristu kuwana Zita rimwechete reVanhu vaviri kana vatatu vari muhuMwari hwavo.
Saka rangarirai, kukakavara kwavo kwekuti Jesu pamuchinjikwa aichema kune umwe Munhu aive kuDenga (Mwari Baba) kukakavara kunogumisa Mwari umwechete wemaKristu asina Zita rimwechete. Tichiwedzera, Mwari baba havaripiri muripo wezvivi saka havasiwo Muponesi wedu chaiye nekuti Mwari Baba vakasiya Muponesi wedu pamuchinjikwa.
Asi Mwari ndiye muponesi wedu.
ISAYA 43:11 Ini iyeni, ndini Jehovha, kunze kwangu hakuna mumwe muponesi.
Hamugoni kuturikira chiratidzo chekuDenga nekufungidzira kuti Muponesi Jesu Kristu akamira kana kuti agere parutivi paMwari.
Jesu ega ndiye akasuka kana kunatsa zvivi zvedu. Saka Mwari angava sei Muponesi wedu?
VAHEBERU 1:3 Iye chadzera chokubwinya kwake, nomufananidzo wake chaiye, unotakura zvinhu zvose neshoko resimba rake, wakati anatsa zvivi zvedu iye pachake, akagara kurudyi rwoVumambo kudenga,
Ruvoko rwerudyi mucherechedzo wesimba.
Asi raive ropa raMwari rakatitenga.
ISAYA 43:3 Nokuti ndini Jehovha Mwari wako; Mutsvene weIsraeri, Muponesi wako;
Jehova pano anoti ndiye Muponesi.
ISAYA 43:25 Ini, iyeni, ndini ndinodzima kudarika kwako nokuda kwangu, handicharangariri zvivi zvako
Saka Jehova Mwari ndiye akadzima Zvivi zvedu.
ISAYA 44:6 Zvanzi naJehovha, Mwari wavaIsiraeri, noMudzikunuri wavo, Jehovha wehondo, "Ndini wokutanga nowokupedzisira; kunze kwangu hakuna Mwari.
Hamuzofi makatarisa kuDenga mukaona mumwe munhu achava Mwari akamira kana kugara parutivi paJehova Mwari.
Mweya waMwari ndiwo wega hupenyu husingaperi husina mavambo uye husingazoiti magumo. Mwari vakagara varipo vachavapo. Hatigoni kushandura izvi. Asi hupenyu husingaperi uhu huri muna Kristu.
Tinofanira kucherechedza zviitiko zvepamuchinjikwa zvakanakisisa.
Tisati taedza kutsvaga mhinduro yekuti Jesu aizotaura sei naBaba vake, tinofanira kutanga tatsvaga kuti Mwari Baba vaivepi pakafa Jesu.
Mwari haasi nyama neropa. Saka rutivi rwaJesu rwemunhu harwumuite Mwari.
1 TIMOTIO 3:16 ... chakavanzika chokunamata chikuru kwazvo, chokuti: Iye Mwari wakaratidzwa panyama, ...
VAKOROSE 1:15 [Jesu] Ndiye mufananidzo waMwari usingavonekwi, dangwe rezvisikwa zvose;
Mwari airarama mumunhu wenyama watinodaidza kuti Jesu.
VAKOROSE 1:19 Nokuti Baba vakafara nazvo, kuti kuzara kwose kugare maari,
Waive Mweya waMwari unoshamisa wairarama muMunhu Jesu waimuita kuti ave Mwari.
Chakarasisa Satani ndechekuti Mwari Wemasimbaose akazvivanza muMunhu mumwechete aitambudzika achirohwa zvakaipisisa seMuranda.
ISAYA 45:15 Zvirokwazvo, muri Mwari anovanda, imi Mwari waIsiraeri, Muponesi.
Mwari paakatiponesa, aive akazvivanza. Kupi?
Mwari aive achigara mukati memunhu akarurama Jesu.
II VAKORINTE 5:19 Ndiko kuti Mwari wakanga achiyananisa nyika naye munaKristu akasavaverengera kudarika kwavo, akatipa isu shoko rokuyananisa
Takayananiswa maMwari paCalvari.
Mwari aive munaKristu pataiyananiswa naye. Saka Mwari aive Kristu paCalvari.
JOHANE 16:32 .... yamuchaparadzirwa, ..... mukandisiya ndiri ndoga; asi handizi ndoga, nokuti Baba vaneni.
Mwari Wemasimbaose anoshamisa akaramba ari munaJesu paaive pamuchinjikwa
Baba neMwanakomana vaive Munhu mumwechete nekuti Mwari Mweya unoshamisa waida muviri weMunhu kuti afe kuitira kuti Ropa rakarurama rideurwe kuti risuke zvivi zvedu zvinatswe.
ISAYA 33:3 ..... marudzi akaparadzirwa imi muchisimuka.
Mwari akasimudzwa pamuchinjikwa.
ISAYA 49:16 Tarira, ndakakunyora pazvanza zvangu;
Zvipikiri zvakaroverwa mumaoko emuviri waive uchigara Jehova.
I VAKORINTE 2:8 Bwusina kuzivikanwa nomumwe wavabati venyika ino; nokuti dai vaibwuziva, vangadai vaisarovera Ishe wokubwinya pamuchinjikwa.
Jehova Mwari haangapi kukudzwa kwake kune Mumwwe Munhu.
ISAYA 42:8 Ndini Jehovha, ndiro zita rangu; kukudzwa kwangu handingakupi mumwe,
Mwari haangapi kukudzwa kana kubwinya kwake kunomumwe. Asi Jesu ndiye aive Ishe wekubwinya akaroverwa pamuchinjikwa. Izvi zvinogoneka chete kana Mweya waMwari unoshamisa waive wakavanzwa mukati memuviri waJesu waive wakarohwa nekukuvadzwa.
II VAKORINTE 4:6 Nokuti Mwari, wakareva kuti chiedza chibude parima, ndiye wakavhenekera mumoyo yedu, kuti atipe chiedza chokuziva kubwinya kwaMwari kunovonekwa pachiso chaJesu Kristu.
Kubwinya kwaMwari ndicho chiedza pachiso chaJesu Kristu.
Kana Mweya unoshamisa waMwari wairarama muna Jesu pamuchinjikwa, nei Jesu akanzwa kunge asiiwa.
Kana muri muimba imwechete neumwe munhu akakufuratirai nekuziva, anenge achiramba kutaura nemi munobva manzwa semasiiwa.
Kurwadziwa kukuru uko Jesu, seMunhu, akasangana nako kwaive kusiri marwadzo ekurovererwa asi marwadzo ekupatsanurwa kubva pakuwadzana neMweya Mutsvene waigara paari. Mwari akamufuratira paakatora mitoro yezvivi zvedu pamusoro pake. Akarwadziwa akafa seMunhu apo Mwari Wemasimbaose akaramba kuwadzana naye nechero nzira. (Ndicho chikonzero chikuru chatinodaidzira tafura yaMwari kuti chirayiro patinorangarira rufu rwake. Kurayira pakati pake seMunhu neMweya waigara maari waMwari ndicho chaive chipo chikuru kwaari panyika. Pakagurwa ruwadzano urwu paCalvari, chaive chikamu chakaomarara chekutambudzika kwake kuti atisunungure kubva kuzvivi).
ISAYA 64:7 Hakuna anodana zita renyu, anozvimutsa kuti akunamatireyi; nokuti makativanzira chiso chenyu, mukatinyungurusa nezvakaipa zvedu.
Saka seMunhu, akanzwa asiiwa nekuti aizotambudzika musimba rake iye semunhu. Kazhinji maKristu ese akambosangana nemanzwiro akafanana neaya pane dzimwe nguva mukufamba kwavo semaKristu.
Jesu aizotambudzika nemanzwiro aya ekunzwa asiiwa kuti atambudzike sekutambudzka kwatinoita. Kunzwa kwakadai kwekuti masuwo eDenga apfigwa kwatiri uye tinoita setinoshaiwa mhinduro kubva kuna Mwari.
Asi patinonzwa setasiiwa naMwari, hazvirevi kuti Mwari abva kwatiri. Anenge angozvivanza chiso chake kubva kwatiri kwechinguvana.
MAPISAREMA 77:6 Ndinotaurirana nomoyo wangu; Mweya wangu wakanzvera kwazvo.
Davidi aitaurirana nemweya waigara mukati make.
NEHEMIA 5:7 Zvino ndarangarira mumoyo mangu,
Njere dzemunhu dzakarongwa zvinoshamisa zvekuti dzinogona kurangana pachadzo sekunge uri kutaura nemumwe munhu. Makambokakavadzana mupfungwa dzenyu kakawanda sei zvinoita sekuti pane rimwe izwi rinenge richitaura kwamuri.
Munhu Jesu aivimba nekutaurirana kwaaiita neMweya waMwari waigara maari.
PaCalvari, Mweya waMwari unoshamisa waisakwanisa kutaurirana neMunhu aive akaputirwa nezvivi zvenyika ino zvaaive akatakura. Zvivi zvedu. Mweya waMwari unoshamisa wakafuratira uri mukati make nekuti Mwari haadi zvivi. Izvi zvakasiya hunhu hwemunhu Jesu kuti hurwe nezvivi musimba rake remunhu. Akakunda zvisinei nemarwadzo akakurisa uye kusiiwa kwaakasangana nako. Jesu aive akashinga, aive akashinga kwazvo.
Rufu kuparadzana kwemweya nenyama.
Paakafa, Mweya Mutsvene wakasiya Muviri wake ukaenda kugehena kunorasira zvivi zvedu pana Satani, anova baba vezvivi. Mweya Mutsvene wakabva watora makiyi erufu nehadhesi, ukadzoka kuzoita rumuko nekupinda zvakare muMuviri wake musi weSvondo kuseni.
VAHEBERU 13:8 Jesu Kristu unogara akadaro zuro, nanhasi, nokusingaperi
Jesu hana kubvira ashanduka. Kana Mweya waMwari waive maari, zvinoreva kuti Mweya Mutsvene waive wagara uri maari.
ISAYA 40:25 Ko zvino mungandifananidza nani, kuti ndienzane naye? Ndizvo zvinotaura Mutsvene
Hazvigoneki kuti chero munhu aenzane naJehova Mwari. Mwari mukuru kwazvo. Nyika yedu haigoni kutakura Mwari. Saka Mwari anozadza nekupfachukira munyika yedu. Hakuna nzvimbo inosara kuti ikwane umwe mwari mukuru saye. Hakutorina nzvimbo yakatokwana kuti Mwari iye oga akwane.
VAFIRIPI 2:6 Iye, kunyange akanga akafanana naMwari, haana kuti kuenzana naMwari ndechinhu chinofanira kubatisiswa
JOHANE 5:18 (Jesu) ... asi wakati vo Mwari ndiBaba vake, achizvienzanisa naMwari.
Hakuna akaenzana naMwari. Asi Jesu aive akaenzana maMwari baba.
Izvi hazvigoneke kunze kwekuti Jesu naMwari Baba vaive Munhu Mumwe. Baba vasingaonekwe vaida Munhu weNyama kuti vagare maari kuti Mwari azvizivise kwatiri nemaitiro eMwanakomana wake.
Asi Mwari Baba vaivewo vakakura kumudarika.
JOHANE 14:28 .... nokuti Baba vakuru kwandiri.
Mweya uri mamuri wakakura kudarika miviri yenyu, uye ndiwo unotonga miviri yenyu. Nyaya yenjere pamusoro pechinhu chinoonekwa nekubatika. Asi zvose mweya yenyu nemiviri yenyu ndimi. Kana mumwe munhu akakurumbidzai pamusoro pezvamunoita, zvese njere dzenyu uye miviri yenyu zvinogovana rumbidzo iyoyo nekuti zvese ndizvo imi.
ZVAKAZARURWA 19:15 Mumuromo make makabuda munondo unopinza, kuti arove marudzi nawo; uchaafudza netsvimbo yedare; unotsika chisviniro chehasha dzokutsamwa kwaMwari wamasimba ose.
ISAIAH 63:3 "Ini ndakatsika chisviniro chewaini ndoga; kwakanga kusina munhu wamarudzi avanhu aiva neni;
Isaya akataura kuti Jehova ega ndiye akatsika chisviniro chewaini. Asi Johane muzaruriri akati Jesu akatsika chisviniro chewaini. Saka Jesu ndiye Munhu wenyama maari munogara Jehova Mwari.
Tsitsi dzinobva muHumunhu hwaMwari hwaakararama muMuviri waJesu. Chokwadi chinobva muMweya Mutsvene waive mukati make waida hwaro hwepamusoro-soro pakurarama.
Tsitsi nechokwadi zvakasangana munaJesu Kristu. Mweya waMwari wakarurama wakagara maari ukaratidzira hwaro hwepamusoro-soro hwechokwadi, uye huMunhu hwake netsitsi dzake zvakatipa Muviri wake wakarurama sechibairo kuzvivi zvedu, nekuti aive hama mudzikinuri anotida uye aiziva kuti hataigona kuzorarama nehwaro hwepamusoro-soro hwakaita sehwaakararama.
I JOHANE 5:20 Tinoziva kuti mwanakomana waMwari wakavuya, akatipa kuziva, kuti tizive iye wazvokwadi; nesu tiri munaiye wazvokwadi, mumwanakomana wake Jesu Kristu. Ndiye Mwari wazvokwadi, novupenyu bwusingaperi.
Jesu ndiye zvese Munhu naMwari. Mubatanidzwa wakasarudzika usina chero mumwe munhu angagone kuuita zvachose.